Avadiho impito ny lela ! | NewsMada
Avadiho impito ny lela !
Par Taratra sur 12/03/2019
Efa nisafidy ny fahalalahana isika ary izay no fototra iray hahatongavana amin’ny fandrosoan’ny firenena sy ny isan-tokantrano. Sanatria, tsy misy jadona na an-teritery eto, fa malalaka ny fanehoan-kevitra. Efa nosokafana, toy izany koa, ireo sehatra sy fitaovana samihafa ahafahana manao izany: ny gazety, ny onjam-peo, ny fahitalavitra, ny “facebook”, sns.
Hita tokoa fa ahitam-pahombiazana ny fampiasana ireo fitaovana ireo, indrindra moa ny “internet”. Singanina amin’izany, ohatra, ny mahamora kokoa ny fitadiavana ireo olon-dratsy, noho ny fahamaroan’ny olona mahita ny filazana. Ankehitriny tokoa mantsy, iza no tsy mampiasa “facebook” ary aiza ny toerana tsy azo anaovana izany? Na tsy zato isan-jato aza, heverina fa mba efa maro ihany ny Malagasy misitraka ity fitaovan-tserasera haingana dia haingana ity.
Na izany aza anefa, tokony hisy fahamatorana sy fitandremana ny fampiasana azy ireny. Ankehitriny, toa lasa mpanao gazety daholo ny rehetra: mitatitra tranga tetsy sy teroa, maneho hevitra, manaitra ny sain’ny tsirairay amin’izay hita ho tsy ara-dalàna, sns. Tsy ny olon-drehetra koa anefa no afaka manaporofo ny fahamarinan’ny zavatra hitany na reny. Vokany, tenikely na sary indray mandefa, mampiova zavatra betsaka: manimba fiainan’olona, mampiady olona, manakorontana fiarahamonina, sns.
Sarotra ny hametra na hamefy tanteraka ny olona amin’ny fampiasana ireny tambajotran-tserasera ireny. Toa maningotra ny fahalalahana eo am-pelatanany izany, saingy ny tsirairay mihitsy no tokony ho tonga saina, hahatsapa tena ho tompon’andraikitra amin’izay ataony ka hamakafaka sy hanadihady izay lazaina sy soratana ary aseho ho hitam-bahoaka.
Avadiho impito ny lela vao miteny, hoy ny fahendren’ny ntaolo malagasy. Raha ny zava-misy vokatry ny fihazakazaky ny teknolojia ankehitriny, tsy ampy io. Tsy ny olon-drehetra no mpanao gazety, izany hoe mitaky fahaizana sy fahalalana ny fampahafantarana karazam-baovao sasany. Rehefa tsy voafehy izay, aza lazaina!